Mucjisada Yurub Ee Erling Haaland Oo Soo Xushay Shaxdiisa Shan Geesoodka Ah Ee Ciyaartoyda 21-ka Ka Yar. – Gool24.Net
Mucjisada Yurub Ee Erling Haaland Oo Soo Xushay Shaxdiisa Shan Geesoodka Ah Ee Ciyaartoyda 21-ka Ka Yar.
30/04/2020 Mahamoud Batalaale
Erling Haaland waxa uu ahaa layaabkii xili ciyaareedkan ka soo dhex baxay horyaalada Yurub wuxuuna si gaar ah layaab uga soo sameeyay tartanka kooxaha Yurub ee Champions league.
Erling Haaland oo lagu tilmaamo da’yarkii ugu saamaynta badnaa xili ciyaareedkan ayaa la waydiiyay in uu soo xusho shaxdiisa shan geesoodka ah ee xidigaha ay isku ayniga yihiin ee 21 sano jirka ka hooseeya.
19 sano jirkan reer Norway ee Erling Haaland ayaa bilawgii xili ciyaareedkan wacdaro u soo sameeyay kooxda RB Salzburg oo uu Champions league goolal badan uga soo dhaliyay wuxuuna hadda ka tirsan yahay kooxda Borussia Dortmund oo uu ku soo biiray suuqii bishii January.
Erling Haaland ayaa shanta ciyaartoy ee uu ku soo doortay shaxdiisa shan geesoodka ah waxa uu ku bilaabay goolhayaha da’yarka ah ee kooxda AC Milan ee Gianluigi Donnarumma.
Halka difaac ee uu shaxdiisa shan geesoodka u soo doortay Haaland ayaa noqday difaaca kooxda Juventus ee Matthijs de Ligt kaas oo aan qiimihii uu Turin ugu biiray u cudur daarin balse wali ka mid ah difaacyada da’yarta ah ee ugu fiican Yurub.
Kadib waxa uu Erling Haaland soo xushay xidiga kooxda PSG ee Kylian Mabppe kaas oo lagu xisaabiyo da’yarka aduunka ugu fiican dhawrkii sanadood ee ugu danbeeyay.
Waxa kale oo uu Erling Haaland shaxdiisa shan geeskoodka ku soo darsaday xidiga ay kooxda Borussia Dortmund kawada tirsan yihiin ee Jadon Sancho kaas oo ay kooxaha Yurub ugu waa wayni ku dagaalamayaan, waxaana shanta xidig ee shaxdan ku soo baxday uu ku dhamaystiray isaga oo qayb ka ah.
Shaxda Shan Geesoodka Ee Erling Haaland ee ciyaartoyda ay da’doodu ka hooayso 21 sano Jirka.
Erling Haaland laftiisa ayaa mustaqbalkiisa Borussia Dortmund shaki la galinayaa iyada oo kooxihii bishii January saxiixiisa seegay ay markale doonayaan in ay isku dayaan in ay la soo wareegaan.